Izindawo ezihamba phambili ze-Acoustical, i-3d wall panel, amathayili we-acoustic, abakhiqizi bephaneli yokumunca i-acoustic nabaphakeli | UVinco
Iphaneli ye-polyester fiber acoustic
Iphaneli ye-polyester fiber acoustic yenziwa nge-100% fiber, ngemuva kokucindezelwa okushisayo ukwakheka kukotini. Futhi sisebenzisa umshini wokushisa ohlukile ukufinyelela kubantu abahlukahlukene futhi siqiniseke ukuthi umoya wawo ungena kahle, okwenza ube mnandi kakhulu futhi ube yimikhiqizo yokufaka umoya.
Igama lomkhiqizo Iphaneli ye-polyester fiber acoustic
Izinto zokwakha I-100% yefayibha yekhwalithi ephezulu
Usayizi 1220 * 2440 * 9 / 12mm (ezinye ukushuba kungenziwa egcizelele)
Ubuningi 160- 229kg / M3
Umbala Ishadi lemibala
Umphumela odonsa umsindo 0.85
Ukumelana Nomlilo Ibanga B1
Ezemvelo Ibanga E1
Umumo we-engela Chamfer, iqonde
Isicelo Studio, enkulisa, cinema, studio, njll.
Izithombe zephaneli ye-polyester fiber acoustic:
Izinzuzo zephaneli ye-polyester fiber acoustic:
2) Eco, Non-iphunga, Ukuphepha futhi kulula ukuhlanza
3) Umphumela omuhle wokuhlobisa, nezinhlobo ezingaphezu kuka-40 zemibala
Iphaneli ye-polyester fiber acoustic application:
Isetshenziswa kabanzi ezindlini ze-opera, amahholo amafilimu nakumabonakude, ama-studio okuqopha, amakamelo okusakaza, iziteshi ze-TV, amahholo anemisebenzi eminingi, amakamelo ezinkomfa, amahholo amakhonsathi, amahholo, amadolobha okuphumula nawokuzijabulisa, amahhotela, i-KTV, njll.
Izimpahla zizopakisha ngama-polybags
Ukuhamba: Ngolwandle noma ngendiza
1.Umsebenzi - Sinabasebenzi bokuthengisa abaqeqeshiwe. Noma yimiphi imibuzo izophendulwa kungakapheli amahora angama-24.
2. Intengo - Ngoba siyifekthri, ngakho-ke singanikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nemali ephansi.
3. Isevisi - Kulula futhi kulula ukuthutha, sithembisa usuku lokulethwa okufika ngesikhathi, kanye nensizakalo enhle emva kokuthengisa.
4. Ithimba - Sinomnyango wethu wobunjiniyela, ngokwesicelo sakho senzelwe umkhiqizo wakho owenzelwe wena.
1. Siyajabula kakhulu ukuthi ikhasimende lisinika isiphakamiso sentengo nemikhiqizo.
2. Uma kukhona umbuzo, sicela usazise okokuqala nge-imeyili noma ngocingo. Singabhekana nabo ngesikhathi.
1. Uma ikhasimende linokuhlelwa okuthile eChina, sicela usazise. Sithanda ukukusiza ukubhuka ihhotela futhi sikulande esikhumulweni somoya, noma esiteshini sesitimela.
2. Noma yiziphi ezinye izinkinga, sicela ukhululeke ukubuza, futhi sizozama konke okusemandleni ukukunikeza!
Ngibheke phambili ekuphenyweni kwakho ngomusa
Langaphambilini I-Acoustic treatment bass trap
Olandelayo: Ukugoqa ukugoqa, ukugoqa udonga lokuhlukanisa
Q: Uzothatha isikhathi esingakanani ukwenza amasampuli?
A. Ngokuvamile sizothatha izinsuku ezi-1 ~ 7 ukwenza amasampula.
Q: Uyini isikhathi sakho sokulethwa?
Isikhathi sokulethwa singaphakathi kwezinsuku eziyi-15-25 ngemuva kokuthola idiphozi.
Q: Ingabe ukushaja isampula?
Amasampula ajwayelekile amahhala, kepha amasampula enziwe ngezifiso azokhokhiswa izindleko ezifanele kanti nemithwalo iyakhokhiswa. Ngemuva kokuthi i-oda liqinisekisiwe, sizoyikhokha imali ebekiwe. Sicela uqiniseke ngalokho.
A: Inkokhelo <= 1000USD, 100% kusengaphambili. Inkokhelo> = 1000USD, 30% T / T kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Q: Ungayamukela i-OEM?
A: Yebo, njengomkhiqizi, singavula isikhunta ukukhiqiza noma yimiphi imikhiqizo yephaneli ye-acoustic ngokusho kwesampula noma umdwebo wakho.
Uma uneminye imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, ngiyabonga!
Iphaneli ye-Acoustic soundproofing, udonga lwe-acoustic til ...
Okuhlobisa amapulangwe odonga ama-3d, i-acoustic soundproof, ...
Ukumunca iphaneli, i-3d acoustic panel, ukumunca im ...